« AIDE-CHAUFFEUR » VOAROAKA TAMIN’NY ASANY : Namono ny vady aman-janaky ny mpampiasa azy
Nandriaka ny ra tao Analan-kininina Hopitaly Be ny maraimben’ny talata 19 marsa lasa teo, tokony ho tamin’ny 3 ora. 19 mars 2019
Tovolahy iray izay manao asa “aide-chauffeur” no nahavanon-doza tao amin’ilay tokantrano niasany ihany. Raha ny angom-baovao, dia nanomboka tamin’ny taom-piotazana letisia tamin’ny taon-dasa no niasany tao amin’io tokantrano io. Tsy avy ao Toamasina kosa izy fa mpila ravinahitra.
Andro vitsy lasa izay, nisy tsy fifanarahana teo aminy sy ny mpampiasa azy ka najanona tamin’ny asany izy. Mandrapahitàny asa kosa dia mbola niantra azy ity fianakaviana kely ka namela azy niara-nipetraka tamin’izy ireo.
Nipetraka tao anatin’ity tovolahy ihany anefa ny lolom-po. Ny marainan’io talata 19 marsa io, tamin’ny fotoana tsy naha tao an-trano ilay raim-pianakaviana mpampiasa azy, dia novonoiny ho faty ny vady aman-janany. Daroka, tsatok’antsy maranitra, sotro rovitra (fourchette) no nampiasain’ilay tovolahy namonoana azy mianaka.
Rifatra nandositra izy taorian’izay.
Nifamonjen’ny mpiara-monina izy mianaka kely. Tonga teny amin’ny hopitaly manara-penitra, tsy tana ny ain’ilay ankizilahikely. Ity farany izay vao 4 taona monja. Mbola miady amin’ny fahafatesana kosa ny reniny. Ity farany izay re fa sady mitondra vohoka ka tsy mbola hay izay mety hiafarany. Ny irariana dia ny mba hahazoany fahasalamana sy ny zaza ao am-bohoka. Mitohy ihany koa ny fikarohana ilay nahavanon-doza.